Chelsea Oo Isha Ku Haysa Xiddiga Barcelona Ee Sergino Dest Inay Ka Dhigto Bedelka Lucas Digne
HomeWararka CiyaarahaChelsea oo isha ku haysa xiddiga Barcelona ee Sergino Dest inay ka dhigto bedelka Lucas Digne
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay u dhaqaaqdo daafaca dambeedka midig ee Barcelona Sergino Dest si ay bedel uga dhigto ciyaaryahanka Everton ee Lucas Digne .
Blues ayaa suuqa ugu jirta xoojinta daafaca bisha Janaayo, iyagoo arkay Ben Chilwell oo soo gaaray dhaawac jilibka ah isagoo maqan xilli ciyaareedka, halka Reece James uu sidoo kale haatan dhaawac ku maqan yahay.
Chelsea waa mid ka mid ah kooxaha loo maleynayo inay ku jiraan tartanka loogu jiro saxiixa daafaca bidix ee Everton Digne, oo ay wehliyaan kooxaha West Ham United , Newcastle United iyo Napoli .
Si kastaba ha ahaatee, Daily Star ayaa ku warameysa in kooxda Thomas Tuchel ay qiimeyneyso Dest oo Ka tirsan Barcelona si ay u noqoto dookh kale sababtoo ah 21 jirkaan ayaa awood u leh inuu ka ciyaaro dhanka bidix iyo midig ee daafaca.
Dest ayaa ku soo bilowday kaliya hal kulan oo La Liga ah Barcelona tan iyo bishii October, ka dib markii uu hoos u dhacay heerka koowaad ee tababaraha cusub ee Xavi .
Kooxda reer Spain ayaa u furan inay u ogolaato xiddiga heerka caalami ee dalka USA inuu ka tago kooxda bishaan iyagoo doonaya inay boos ka helaan miisaaniyadooda mushaharka, iyadoo saxiixeeda cusub ee Ferran Torres uusan haatan awoodin in la diiwaan geliyo arimo dhaqaale awgood.
Barca ayaa lagu soo waramayaa inay ku dalban doonto ku dhawaad ​​30 milyan ginni Dest, kaasoo sidoo kale lala xiriirinayo Manchester City , Arsenal , Tottenham Hotspur iyo Bayern Munich .
Dest ayaa Camp Nou soo gaadhay sanadkii 2020 wuxuuna u saftay 57 kulan dhamaan tartamada oo dhan.